"Haddii Aad Doonayso Inaad Kordhiso Xawaaradaha Ciyaartaada, Waa Inaad Maskaxdaada Dedejiso" - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha“Haddii Aad Doonayso Inaad Kordhiso Xawaaradaha Ciyaartaada, Waa Inaad Maskaxdaada Dedejiso”
“Haddii Aad Doonayso Inaad Kordhiso Xawaaradaha Ciyaartaada, Waa Inaad Maskaxdaada Dedejiso”
November 25, 2021 Abdiwahab Ahmed
Ralf Ragnick ayaa noqonaya tababaraha cusub ee Manchester United, kaas oo uu xilka ku wareejinayo Michael Carrick oo si ku-meelgaadh ah usii hoggaamiyey kooxda ciyaartii Villarreal ee tartanka Champions League.
Falsafadda ciyaareed iyo xeeladaha u gaarka ah ee ay tababareyaal badan kaga daydeen sida Jurgen Klopp iyo Thomas Tuchel ayaa ah waxa la hadal hayo.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa faaqidaya aragtida Ralf Ragnick ee kubadda cagta, iyagoo dib usoo daabacay hadallo uu ka jeediyey shirar hore.
Wargeyska MEN ee kasoo baxa magaalada Manchester, ayaa soo daabacay qudbad uu jeediyey, taas oo uu ka yidhi sidan: “Haddii aad doonayso inaad kordhiso xawaaradaha ciyaartaada, waa in aad dedejisaa kobcinta maskkaxdaada halkii aad lugaha ka dedejin lahayd.
“Markii aan joogay RB Leipzing, waxa aanu kordhinay booska xasuusta iyo sida loo habeeyo orodka. Waxa aanu u samaynay ciyaartoyda mishiin qiimeeya ciyaartoodii hore, una ogolaada inay dib u daalacdaan waqtiyadii muhiimka ahaa ee ciyaarahaas.
“Waa sida PlayStation-ka kubadda cagta oo kale, laakiin aad lugahaaga ka samaynayso. Ciyaartoydu aad ayay uga haleen, kaddibna waxa nagu adkaatay in aanu joojino qaarkood.
“Taakikada, taam ahaanshaha iyo shuruucda ayaa dhamaantood muhiimad weyn leh, laakiin dhamaantood waxay yihiin dariiq meel ku dhamaanaya (guul). Shaqadaydu waa inaan horumariyo ciyaartoyda, ciyaaryahannaduna waxay ku raacayaan haddii ay arkaan inaad ka dhigayso kuwo wanaagsan. Taas ayaa ah waxa ugu wanaagsan iyo dhiirigelinta ugu fiican.”
Fikirkeyga hadaan ka hadlo
Waa Tababaraha ugu macquulsan ee waqtigaan loo dhiibi karo Man utd.
ManChester United Tababarahaan aad ayuu u an facayaa 100/100 Good Jois👍